Ogaden News Agency (ONA) – Heshiis dacaayad loogu talagalay oon ahayn mid dhaqaale
Heshiis dacaayad loogu talagalay oon ahayn mid dhaqaale
Dawladda Itobiya waxay aad isugu dhabar jabisay oy geed walba u fuushay inay shirakda caalami ah gaar ahaan kuwa reer Galbeedka soo dhex galiso shidaalka ceegaaga Ogadenya. Hasa ahaatee arintaasi waxaa ka caagay oo ka caga jiiday shirkadihii waaweynaa ee caalamiga ahaa. Sidaa darteed ayay u sameeyeen xataa shirkad Wayaanuhu leeyahay oo lagu magacaabay inay tahay shidaal baadhe oo la yidhi waxay kala wareegtay Petronas dhulkii loo meegaaray ee lacagta badan lagaga cunay.
Dhowr jeer oo hore ayuu Wasiirka ku magacaaban Macdanta ee Itobiya sheegay inuu shirkad la saxiixay heshiis shidaalka Ogadenya, muddo ka dibna waxaan maqlaynay shirkad kale oon ahayn middii hore oo hadana heshiis kale lala galay. Shirkadaha aan maqalnay laga bilaabo 2007dii inay ka iibiyeen baadhitaanka shidaalka waxaa ka mid ahaa; Africa Oil Corporation oo Canada ah, New Resolution Geo physics (NGR) oo Koonfur Afrika ah, Tullo Petroleum iyo White Nile Petroleum, oo fadhigoodu yahay Ingriiska. Waxaa intaba ka horeeyay Petronas oo isaga baxday gabi ahaanba Itobiya.
Waxaan hadda maqalaynaa shirkad Shiina ah oo fadhigeedu yahay Hong Kong oo magaceeda la qariyay (maxaa loo qariyay?), inay dawladda Itobiya kaga iibsatay mashruucii Gaaska ee Kalub (Calub Gas Reserve) lacag gaareysa 200 oo malyan. Waxay sheegeen in wasaaradda macdanta ee Itobiya ay suuqyada caalamka gaysay qandaraas loogu tartamayo mashruuca kalub bishii Maarso ee sanadkan, halkaasoo ay shirkada 7ba gaaraya siday leeyihiin ay soo qorteen. Waxaana ku guulaysatay bay yidhaadeen shirkad Shiina ah oo magaceeda la qariyay. Hadalla kale oo is-dhex yaac ah ayay ku sheegeen in 2ba todobaad gudohood lagu soo bandhigi doono natiijada qandaraaskaa oo aan weli la dhamaynin. Xaalkoodu waa todobababa tala ka dhalatay, sababtoo ah waxaa dalka jooga oo gacanta ku haya CWXO oy ogyihiin in aanay u ogolayn shirkadahaa inay soo galaan dalka iyadoon qadiyadda aay-ka-tashiga shacabka Ogadenya xal loo helin.
Ugu dambayntii, digniintii Jabahdda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxba iskama badalin caalamkana wuu ogsoon yahay inay Ogadenya tahay goob dagaal. Shirkadii faraha la soo gasha iyada umbaa ka masuul ah dhibaatada soo gaadha. Isla marahaantaa waxaa lagula xisaabtami doonaa dhibaatadii loo gaysto shacabka si loo ilaaliyo joogitaankooda.